Abavelisi base China ababalaseleyo beZibulali zinambuzane zeSpinosad kunye nabathengisi Senton
Spinosad yokubulala izinambuzane ezibalaseleyo
Imveliso igama: I-Spinosad
Ifomula yeMolekyuli: C41H65NO10
Ubunzima beFomyula：731.96g / mol
CAS Hayi. 131929-60-7
Ubunzima beFomyula 731.96
Ifayile yeMol： 131929-60-7.mol
Ikhowudi ye-HS: 29322090.90
ISpinosad yi IzinambuzaneI-Spinosad isetyenzisiwe kwihlabathi liphela ukulawula iintlobo zezinambuzane, kubandakanya iLepidoptera, iDiptera, iThysanoptera, iColeoptera, iOthoptera, iHymenoptera, kunye nezinye ezininzi. Imveliso yendalo, iyamkelwa ukuze isetyenziswe kwi-organic ezolimoIintlanga ezininzi kunye nezinye izinto ezisetyenziselwa i-spinosad zezilwanyana zasekhaya kunye nabantu. I-Spinosad kutshanje isetyenziselwe ukunyanga ikati, kwii-canines kunye ne-felineUkubulala ukungunda.
Inkampani yethu u-Hebei Senton yinkampani yokurhweba yamazwe aphesheya.Amashishini amakhulu afaka Iikhemikhali zeekhemikhali, API & Abaphakathi kunye neekhemikhali ezisisiseko. Ukuthembela kwiqabane lethu lexesha elide kunye neqela lethu, sizimisele ukubonelela ngeyona mveliso ifanelekileyo kunye neenkonzo ezilungileyo zokuhlangabezana neemfuno zabathengi eziguqukayo.Inkampani yethu isasebenza kwezinye iimveliso, njenge Isulfonamide IMedikamente,AbaPhakathi beKhemikhali,Imigangatho yeHerbal Extract kwaye nangokunjalo.
Isixhobo sekhomputha esomeleleyo Sinokhetho olubanzi kumaxabiso amahle ukukunceda ufumane ubuchule bokuyila. Zonke izinto ziya kufunyanwa kwiindidi zebacteria ziqinisekisiwe ngomgangatho. SiyiChina iMveliso yokuLawulwa kweZinambuzane ezahlukeneyo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Ukubulala izinambuzane ukubulala iSpinosad
Amagqabantshintshi e-Organic Fungicide Sulfacetamide
Isetyenziswa ngokubanzi kwi-insecticide ye-Abamectin
Ispinosad yokubulala intsholongwane encinci
I-Agrochemical Fungicide esemgangathweni yeFenamidone
Amagqabantshintshi e-Organic Fungicide Abamectin